Iapile ikhupha iziphumo zezemali kwikota yesibini yonyaka-mali | Ndisuka mac
U-Apple usebenze izolo kwaye wasinika iziphumo zemali esizifumene kule kota yesibini yonyaka. Ngokusekwe kwinto enokubonakala kule ngxelo, Ukuthengisa kukhula nge-16% kunye nomvuzo ngesabelo ngasinye kwiipesenti ezingama-30, Ukubeka iirekhodi ezintsha kule kota kaMatshi.
Akunyanzelekanga ukuba sikhumbule ukuba inkampani yaseCupertino ivala iikota ngokwahlukileyo kwezinye iinkampani kwaye kule meko, ngoMatshi 31, Q2 yaphela. Ngamanani alungileyo kunye nentengiso yekota ye- $ 61.100 yezigidigidi, ukukhula ngeepesenti ezili-16 kwithuba elifanayo kunyaka ophelileyo. Ikwafumana ingeniso yekota ngexabiso le- $ 2,73 ngesabelo ngasinye, ukukhula kweepesenti ezingama-30 kwizabelo.
I-65% yentengiso yekota yenziwe yiApple ngaphandle kweUS
I-Apple inikezela ngesi sikhokelo silandelayo kwikota yesithathu ka-2018:
Ingeniso phakathi kwe- $ 51.500 yezigidigidi kunye ne- $ 53.500 yezigidigidi
Umda opheleleyo phakathi kweepesenti ezingama-38 nama-38,5 epesenti
Iindleko zokusebenza phakathi kwe- $ 7.700 yezigidigidi kunye ne- $ 7.800 yezigidigidi
Enye ingeniso / (inkcitho) ye- $ 400 yezigidi
Uqikelelo lwerhafu yeepesenti ezili-14,5
Ngayiphi na imeko amagama we UTim Cook, umphathi wenkampani icacile:
Kuyasivuyisa ukunika ingxelo ngekota egqwesileyo kaMatshi ukuza kuthi ga ngoku, ngokukhula okunamandla kwengeniso ye-iPhone, iiNkonzo kunye nezinto ezinxibekayo. Abathengi bakhethe i-iPhone X ngaphezulu kwayo nayiphi na enye i-iPhone kwiveki nganye yekota kaMatshi, kanye njengoko benzayo emva kokumiliselwa kwikota kaDisemba. Sikonyuse nengeniso kuyo yonke imimandla yethu, ngokukhula okungaphezulu kwama-20% e-China nase Japan.
Ngecala lakho U-Luca Maestri, oligosa eliyintloko kwezezimali e-Apple:
Ishishini lethu liqhube kakuhle kakhulu kwikota kaMatshi: umvuzo ngesabelo ngasinye ukhule ngeepesenti ezingama-30 kwaye sivelise ngaphezulu kwe- $ 15.000 yezigidigidi zokuhamba kwemali. Ngombulelo kuguquko olukhulu esinalo ngoku kunye nokufikelela kwimali yethu yehlabathi, siyakwazi ukutyala imali ngokukuko kwimisebenzi yethu yase-US kwaye sisebenzela kulwakhiwo olululo lwenkunzi. Ngenxa yentembelo yethu kwikamva le-Apple, sonwabile ukubhengeza ukuba iBhodi yaBaphathi ivume isabelo esitsha sokubuyisa isabelo se- $ 100.000 yezigidigidi, kunye nokunyuka nge-16% kwisahlulo sekota.
Inkampani iya kugqibezela ukwenziwa kwesigunyaziso sokubuyisa isabelo sangaphambili, esixabisa i-210.000 yezigidi zeedola, kwikota yesithathu yonyaka-mali. Ukusukela oko kwaqalwa inkqubo yokubuya kwe-equity ngo-Agasti 2012 ukuya nge-Matshi 2018, iApple ibuyise i-275.000 yezigidigidi kubanini zabelo, kubandakanya i-200.000 yezigidigidi kwizabelo zokuthenga. IKomiti yoLawulo kunye neBhodi yaBalawuli iya kuqhubeka nokuhlalutya rhoqo into nganye yenkqubo yokubuyisa inkunzi kunye nesicwangciso sokubonelela ngohlaziyo lwenkqubo rhoqo ngonyaka. Unga mamela yonke ingxelo kwakhona kweziphumo ngqo kule linki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » U-Apple upapasha iziphumo zezemali kwikota yesibini yonyaka-mali